ukujongana: ukuthengwa okungcono kukuthengisa i-amazon echo (i-2nd gen) kunye ne-echo dot smart speakers kumaxabiso amnyama ngoLwesihlanu
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Idili: Ukuthenga okungcono kukuthengisa iAmazon Echo (2nd gen) kunye nezithethi ezihlakaniphile zeEcho Dot ngamaxabiso oLwesihlanu oMnyama
IAmazon Echo Dot (Isizukulwana sesi-3) Eyona Ntengiso Entsha $ 20.99 ngexabiso
(Isizukulwana sesi-2) Eyona Ntengiso Entsha $ 69.99
Thenga iAmazon Echo Dot : Thenga iAmazon Echo
Ukuba wena & apos; ujonge ukukhulisa ikhaya lakho ngeAmazon & apos; ii-Alexa-powered Echo izithethi ezikrelekrele, isivumelwano sangoku seBest Buy sinokuba sesakho. Umthengisi ngoku uthengisa ezimbini zeemodeli ze-Echo ezaziwa kakhulu ngamaxabiso athelekiseka nalawo aphelileyo nangoLwesihlanu omnyama.
Ungabamba i-3-gen Echo Dot kwiCarcoal, eSandstone, okanye kuHeather Grey ngexabiso eliphantsi njenge- $ 20.99, eyi- $ 3 ngexabiso eliphantsi kunesipho esimnyama sangoLwesihlanu. Okwangoku, isithethi esikrelekrele esikhulu se-Echo sinokuthengwa ngemibala efanayo ye- $ 69.99 okanye yidola kuphela ephezulu kunexabiso esilibonileyo ngoNovemba 2018.
Nantsi iapos; sungayisebenzisa njani le nto-Ukuze ufumane amaxabiso ancitshisiweyo, kuya kufuneka ubhalisele Eyona Ndleko yokuThenga kunye neApos zabafundi Inkqubo. Ikhululekile kwaye ithatha kuphela imizuzwana embalwa. Awudingi ukuba nedilesi ye-imeyile yomfundi, okuthetha ukuba phantse nabani na angayenza. Emva kokuba ubhalisile, uya kufumana ikhowudi yekhuphoni nge-imeyile. Ngenisa ngexesha lokuphuma, cofa u-'Faka isicelo 'phantsi kwesibonelelo sam seLungu eliKhulu, kwaye uza kufumana isaphulelo.
uyisebenzisa kanjani i-lg v20 camera
Landela la manyathelo ukufumana iKhaya laseKhaya likaGoogle kunye neenyanga ezi-2 zeSpotify Premium nge $ 1 nje
Isizukulwane seJava esingaQhelekanga
Ngaba ukhe wayibona iMagikarp yegolide kwiPokemon GO okwangoku?
Umahluko phakathi kwe-iPhone 7, i-iPhone 7 kunye ne-iPhone 8: yonke into esiyilindeleyo